ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်စဲရေး ကော့သောင်း မြို့ခံများ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ ၆၅နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနဲ့အတူ ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒသဘောထား ထုတ်ဖော်ပွဲတခုကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကော့သောင်းမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ဇန်နဝါရီ ၄ရက်(လွတ်လပ်ရေး)နေ့မှာ ကော့သောင်းမြို့NLD အဖွဲ့ဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပုံ
ကော့သောင်းမြို့ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်အင်အား ၃၀၀ခန့်ဟာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက အဏ္ဍဝါရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်မှာ သွားရောက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်ရုံးတည်ရှိရာ မြရည်ပုလဲလမ်းကို လာရောက်ပြီး ရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ကချင်စစ်ပွဲကို ရပ်တန်းကရပ်ပါ၊ စစ်ပွဲမှန်သမျှဆန့်ကျင်ကြ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြ စတဲ့ပိုစတာတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ၁၅မိနစ် မလှုပ်မယှက်ငြိမ်ပြီး ရပ်နေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်း က အခုလိုပြောပါတယ်။
"ကချင်စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကော့သောင်းနယ် နယ်သူနယ်သားတွေအားလုံး၊ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက ဒီကချင်ပြည်သူတွေနဲ့ တသားထဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကိုပြတဲ့ သဘောပါ၊ အခုအပတ် ကျနော်တို့ NLD ကထုတ်တဲ့ ဒီလှိုင်းဂျာနယ် နောက်ဆုံးမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောထားတာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ၊ မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက တောင်ပိုင်းသားနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ အားလုံးဟာ တလှေထဲစီး တခရီးထဲသွားတဲ့ လူတွေပါပဲတဲ့ အဲဒီတော့ ဗမာပြည်ဘက်က ဗုံးနဲ့ အမြှောက်နဲ့ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ဗုံးခွဲနေတာတို့မျိုးကို ကျနော်တို့က လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်"
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေ တင်ပြတဲ့အချက် ၉ ချက်မှာ ၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှစ၍ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆိုင်းကြပါစို့၊ ကချင်စစ်ပွဲကိုစစ်ရေးအစား နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်းရေး၊ စစ်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် လူမမယ်ကလေးငယ်များဧ။် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းစာပါ စတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် လွပ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာမှာ ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးများက လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံများ၊ သိကောင်းစရာများ ဟောပြောကြပြီး မနက် ၁၁နာရီမှာ အခမ်းအနားကို အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကော့သောင်းကလူတွေ၊ မင်းတို့တွေ ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ဖူးသလား၊ ဒီကလူတွေ ဘယ်လောက်ဒုတ်ခဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိလား၊ မျိုးမစစ်တဲ့ကောင်တွေ ဒုတ်ခပေးသမျှကို ခံနေရတာကွ။ အစိုးရကို ထောက်ခံတယ်၊
Jan 09, 2013 09:32 AM
အစိုးရကိုဘဲအပြစ်ပုံလို့မရပါ kia kioအဖျက်လုပ်ရပ်လုပ်နေသမျှသည်းခံဖို့မလိုပါကချင်လူထုကိုမစာနာတာ kia kioခေါင်းဆောင်တွေပါ။
KIA က တာဝန်ရှိသည့် အတိုင်း နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးဖို. ကတိကဝတ်တောင်းတယ်။ အဆိုးရက ခု ပြဿနာမှာ လုံးဝ တာဝန် ရှိတယ်၊ ဘာလို. လက်နက်ကိုင်တွေကို အမိန်.ပေး တက်လာ ရမ်းကားခိုင်းနေတာလဲ၊ KIA ကတောင်ပေါ်မှာ သူ.ဟာသူ အေးဆေး နေတာ ကို တုတ်နဲ. လာထိုးတာ။
ဲငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရတစ်ဘက်တည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ကေအိုင်အေမှာ လည်းရှိတယ်......
Jan 04, 2013 09:33 AM
VREY GOOD.KACHIN AFFAIR IS CONCERNED BY ALL MYANMAR CITIZENS.